Izindaba - Ungabhekana Kanjani Nokwehluleka Kwe-Valve?
Lapho isithuthuthu sigibela isikhathi eside, imvume ye-valve yenjini ngokuvamile izovela, inkulu kakhulu noma incane kakhulu, ukuthola isizathu, udinga ukuxhumana nemininingwane eminingi, umphakeli we-valve yesithuthuthu ukukunikeza ukuhlaziywa okulula.
Umthelela wokungavunyelwa kahle kwe-valve enjini
Okukhulu noma okuncane izingxenye izingxenye injini isithuthuthu Ukususwa kuzothinta ukusebenza okujwayelekile kwenjini. Ukuvulwa kwesikhashana kanye nokuvalwa kwangaphambi kwesikhathi kwe-valve yokudla: ngenxa yokungavuleki okwanele kwe-valve, inani lokufinyelela elibikwe yinhlanganisela evuthayo lizoncishiswa, okuholele ekwehlulekeni kwamandla enjini.
I-valve enkulu yokukhipha (okungukuthi, isikhathi sokuvula i-valve sifinyeziwe): kunqubo yokukhipha, kubangela ukukhipha okungafanele, ukwehla kwamandla emali okwanele, ukwanda kwesihlabathi samafutha, ukushisa komshini okweqile, ukwehla kwamandla, nokungqongqoza kwe-valve, okuthinta impilo yenkonzo zezingxenye.
Ukuvulwa kokuqala nokuvalwa kwesikhathi kwe- i-valve yokudla injini yesithuthuthu(ubude bokuvulwa kwe-valve bude): kubangela ukuvalwa kwe-valve okuxekethile nokuvuza komoya, okunciphisa ukucindezelwa namandla enjini. Ezimweni ezinzima, i-valve izokwenza inani elikhulu lokufakwa kwekhabhoni noma i-ablative, ukuze isilinda singakwazi ukusebenza ngokujwayelekile.
I-valve yokukhipha encane: iholela ekuvaleni kwe-valve okuxekethile nokuvuza komoya eNanchang, ngakho-ke amandla omlilo awaphelelanga namandla ancishisiwe. Kwesinye isikhathi kuzoba nesimo sokuqhuma kwepayipi lokukhipha.
Ungabhekana kanjani nokulimala kwezingxenye ze-valve yenjini yesithuthuthu
1. Ingaphezulu le-valve liqhephukile noma lincishisiwe, okufanele lithathelwe indawo.
2. Ngemuva kokuthi ubuso bokuphela kwenduku ye-valve bugqokiwe, kungagaywa kusigaxa sangaphandle se-cylindrical futhi kusetshenziswe ngemuva kokubuyiselwa kwendawo ebushelelezi.
3. Izinga lokugoba lenduku ye-valve lidlula u-0.03mm. Lapho ukuhlanekezela okuphezulu kwe-valve kudlula i-0.02mm, i-bulge ingahle ilungiswe ngokukubeka kumshini wokushicilela bese ihlolwa ngesibonisi sokudayela ngensimbi emise okwakwa-V ize ifaneleke.
4. Uma kukhona i-black carbon ne-grey lead oxide kumphezulu wesigaxa se-valve, ingagcotshwa kaphalafini, bese isuswa nge-scraper sokhuni noma ngebhulashi lethusi ngemuva kokuthamba.
5. Uma induku ye-valve ingagqokile kahle futhi ukuphambuka kobuzungezi ne-cylindricity kungadluli i-0.03mm, induku ye-valve ingapholishwa ngosayizi wokulungisa kumshini wokugaya ongaphakathi, bese ilungiswa ngendlela ye-chrome plating.
6. Ukushaya kancane, imigodi, njll. Ebusweni besigaxa se-valve kuvame ukukhishwa ngokugaya ngesandla. Ngaphambi kokugaya, i-valve, isihlalo se-valve, kanye nomhlahlandlela kusebenza uphethiloli uhlanzekile, bese kuthi kusigaxa se-valve esigcotshiswe ngohlaka lokugaya olujiyile, nge-twist yenjoloba ukumunca phezulu kwe-valve ukuzungeza kaninginingi bese kuguqula indawo, umgodi, imigodi nokunye ukugaya ukuphuma.
Lapho kuvela indandatho emhlophe kusigaxa se-valve, i-valve icolisiswa ngokunamathisela okuhle kokugaya. Ekugcineni, hlambulula unamathisela ngophethiloli, uthambise uwoyela bese uwugaya imizuzu embalwa.
7. Ukujula okujulile, imigodi, namabala endaweni eyindilinga ye-valve kufanele kupholishwe emshinini wokupholisha i-valve. Uma okokusebenza okungenhla kungatholakali, i-valve nayo ingaba izibopho futhi ukugxila kungalinganiswa ne-collet ebhentshini le-bench, i-lathe encane, noma i-drill kagesi yesandla. Ngemuva kwalokho i-valve ingaqalwa. Amaphutha angafakwa eduze kwendawo eyindilinga ngefayela elihle eliyicaba, bese kuthi indawo eyindilinga ingapholishwa ngendwangu engu-00 emery emhlophe efayeleni. Ijubane lokugaya akufanele libe phezulu kakhulu, ukunyakaza kufanele kube bushelelezi. Uma umphetho ophezulu we-valve utholakala ungaphansi kuka-0.5mm ubukhulu noma usontekile, kufanele ushintshwe.
Ungabhekana kanjani nokulimala kwezingxenye ze-valve yenjini yesithuthuthu?
(1) Faka ungqimba omncane kawoyela obomvu noma uwoyela wokuprinta ku-valve oyindilinga, bese ucindezela ngobumnene i-valve esihlalweni se-valve bese uzungezisa i-1/4 turn ngaphambi kokukhipha. Uma kuneringi lamafutha abomvu aqhubekayo noma amamaki kawoyela we-blueprinting esihlalweni se-valve kusho ukuthi ukubekwa uphawu kuhle.
(2) Ngepensela elithambile (4B noma 5B) dweba imigqa eminingi endaweni yesigaxa se-valve, bese uthinta isihlalo sevalve ujikeleze i-1/4 ithuba ngemuva kokukhipha, njengemigqa yepensela kusigaxa se-valve isikiwe ukuvala, futhi kukhombisa uphawu oluhle.
Uma ufuna ukuthola eminye imininingwane nge i-valve yekhwalithi enhle, ngicela ungangabazi ukusibuza.